Danny Welbeck oo lashaaciyey mudo uu Garoomada dhaawac uga maqnaan doono? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Danny Welbeck oo lashaaciyey mudo uu Garoomada dhaawac uga maqnaan doono?
(19-9-2017) Kooxda kubada Cagta Arsenal ee dalka England ayaa shaacisay dhaawac soo gaaray Weeraryahankeeda Danny Welbeck kaas oo ka soo gaaray kulankii bareejada ku dhamaaday ee ay Lacyaareen Chelsea.
Danny Welbeck oo labadalay daqiiqadii 73 aad kulankii Chelsea ayaa lacadeeyey in uu Garoomada ka maqnaan doono mudo bil ah kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa.
Xiddigaan ayaa seegi doona kulamada Arsenal la Cayaari doonaan kooxaha West Bromwich Albion iyo Brighton & Hove Albion oo ay ladheeli doonaan Horyaalka Premier League,Doncaster Rovers oo ay isku haleeli doonaan koobka EFL Cup iyo Bate Borisov oo ay Wada Cayaarayaan koobka UEFA Europa League.dhamaan kulamadaas Danny Welbeck dhaawac ayuu ku seegi doonaa sida uu cadeeyey Macalin Arsene Wenger.